I-Apple isebenza kwizingilazi ezingokoqobo ezingathandwa kwabathelisi esikubona | Izindaba zamagajethi
I-Apple izobe isebenza izibuko zangempela ezingathandwa kwabathelisi esikubona
U-Eder Esteban | | Apple, Izaziso, Iqiniso langempela
Ezinyangeni ezedlule sikwazile ukubona ukuthi ukungathandwa kwabathelisi esikubona kanye neqiniso langempela kunomfutho omkhulu kangakanani emakethe. Ngakho-ke, izinkampani eziningi zeqa phezu komugqa walobu buchwepheshe. Kubukeka sengathi okunye kokulandelayo kuzoba njalo I-Apple, okwamanje esebenza kwizingilazi ezingokoqobo ezingathandwa kwabathelisi esikubona. Lokhu kushiwo ngabezindaba abahlukahlukene njenge I-CNET.
Esikhathini esedlule, uTim Cook usho ukuthi ubona ikusasa eliningi ekwamukelweni kweqiniso elingathandwa kwabathelisi esikubona. Ngakho-ke kubonakala kuyisinyathelo esinengqondo ukuthi i-Apple igcine isebenzisa lobu buchwepheshe kweminye imikhiqizo yayo. Manje, bayakwenza nalo mbukeli.
Kungaba izibuko ezizohlanganisa ukungathandwa kwabathelisi esikubona nokungokoqobo. Bazoba nesikrini se-8K esweni ngalinye futhi bazosebenza nama-microprocessors enziwe yi-Apple uqobo. Igama lekhodi yalo yi-TN88 futhi njengamanje lisesigabeni sokuqala. Eqinisweni, kulinganiselwa ukuthi ngeke ikhishwe kuze kube ngu-2020 Njengobuncane.
Lokhu uma i-Apple ekugcineni ithatha isinqumo sokwethula lezi zibuko emakethe. Ngoba yize zisathuthukiswa, azikho iziqinisekiso zokuthi zizokwethulwa. Ngakho-ke kulo mqondo kusazodingeka ukuthi silinde isikhashana ukuze sazi ukuthi sizobabona yini empeleni ezitolo.
Lezi zibuko kulindeleke ukuthi zikwazi ukubonisa okuqukethwe kwangempela nokubonakalayo okungokoqobo. Ngaphezu kwalokho, bebezozimela ngokuphelele kweminye imikhiqizo ye-Apple efana ne-iPhone noma iMac. Ngakho-ke babheja isu elihlukile kunezinye izinkampani ezifana ne-HTC kulokhu.
Futhi, kungaba umkhiqizo ongenazintambo, obuzonikeza abasebenzisi inkululeko ethe xaxa yokuwusebenzisa. Okuthile okubalulekile, ngoba izintambo nobuningi bemikhiqizo yamanje kungenye yezithiyo ezinkulu zangempela ezingokoqobo namuhla. Silangazelela ukuzwa imininingwane eminingi mayelana nezinhlelo ze-Apple zalo mkhiqizo kungekudala.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » I-Apple izobe isebenza izibuko zangempela ezingathandwa kwabathelisi esikubona
Abakwa-Airbus nabakwa-Audi bajoyina ukwenza umfutho wenkonzo yabo yamatekisi
Sisondelene ne-teleportation sibonga lokhu okutholakele